Ciidamadda Amaanka oo gacanta ku dhigay Gaari Walxaha Qarxa laga soo buuxiyey | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamadda Amaanka oo gacanta ku dhigay Gaari Walxaha Qarxa laga soo buuxiyey
Ciidamadda Amaanka oo gacanta ku dhigay Gaari Walxaha Qarxa laga soo buuxiyey
Ciidamada amaanka ee Gobolka Bari ayaa habeenimadii xalay gacanta kusoo dhigay gaari lagasoo buuxiyey walxaha qarxa waxaana gaariga lasocdey 5ragga oo loogu tala galay iney fuliyaan qorshaha lagu qarxinayo hubkan.
Walxahan qarxaha oo ahaa ilaa iyo 3waaxood ayaa lagu wadey in lagu qarxiyo goobo kala duwan oo ku yaala Boosaaso waxaana gaarigan laga qabtay wadada jidka 30ka ee Bosaaso gaar ahaan inta udhexeysa madaxtooyada iyo cusbitaalka 3 xidigood bosaaso.
Taliyaha qaybta gobolka bari C/xakiim Xuseen Yuusuf oo Warbaahinta kula hadlay Boosaaso ayaa faahfaahiyey hawlgalkan ciidamadu kusoo qabteen Kooxdaan katirsan Malayshiyaadka Al-shabaab waxaana uu xusay in ay la socdeen dhaqdhaqaaqa kooxdan.
Taliyaha ayaa shacabka usheegay iney dagaal ku jiraan loona baahanyahay iney la shaqeeyaan shacabka si looga guulaysto kooxaha kasoo horjeedka amaanka Gobolka.
Hawlgalkan lagusoo qabtay gaarigan laga soo buuxiyey Waxlaha qarxa ayaa noqonaya kii ugu horeeyey oo noociisa oo ciidamada amaanka sameeyaan sanadkan 2017 waxaana uu qeyb kayahay qorshaha lagu horumarinayo amaanka deegaanada Puntland.
Previous articleBaarlamaanka Jaamacadda Carabta oo Cambaareeyay falkii lagu dilay 45 ruux oo Soomaali ah
Next articleKulan lagu xoojinayay xiriika jaaliyada Soomaaliyeed iyo laamaha amaanka Koonfur Sudan oo lagu qabtay magaalada Juba.